के हो पिनास ? | Himal Times
Home स्वास्थ के हो पिनास ?
सामान्यतया परिवर्तन हुने मौसमसँगै चिसो र चिसोको समस्या हुनु सामान्य कुरा हो तर यदि तपाई यस समस्याबाट निरन्तर चिन्तित हुनुभयो भने तपाई पिनास रोगबाट ग्रस्त हुन सक्नुहुन्छ। साइनस रोग बढेको नाकको हड्डीको कारणले हुन्छ। चिसो र सर्दी दुई चार दिनमा समाप्त हुन्छ, तर पिनासका बिरामीहरु लगातार चिसो र चिसोको समस्या द्वारा चिन्तित हुनु पर्छ।
टाउको दुखाई – पिनास रोगमा टाउको दुख्ने समस्या हुन्छ। टाउको दुखाइ पिनासको मुख्य लक्षण हो । यदि तपाईं टाउको दुख्ने समस्याबाट पनि चिन्तित हुनुहुन्छ भने यो पिनासको कारणले हुन सक्छ। निश्चित टाउको दुखाइको मामलामा एक डाक्टर परामर्श लिनुहोस ।
नाकमा भारी महसुस – पिनासका बिरामीहरूले नाकमा भारी वजन महसुस गर्न थाल्छन् । नाक सुन्निनु पनि साइनसको प्रमुख लक्षण हो। यदि तपाईं पनि यी लक्षणहरू देख्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्।
खोकी र अनुहार सुन्निनु – पिनास रोगले कफ र अनुहार सुन्निनु जस्ता लक्षणहरू देखाउँदछ। यदि तपाईंलाई लामो समयसम्म खोकीको समस्या छ भने, यो पिनासको कारणले हुन सक्छ। यदि यी लक्षणहरू देखा पर्दछ भने डाक्टरसँग परामर्श लिन नबिर्सनुहोस्।
पिनासका चार प्रकारका हुन्छ्न
एक्यूट पिनास समस्या व्यक्तिमा केही प्रकारका भाइरस वा ब्याक्टेरियाको सम्पर्कका कारण हुन सक्छ।
क्रॉनिक पिनासमा, नाक सुन्निनु र दुखाइको समस्या छ। क्रॉनिक पिनासमा, नाकको प्वालको वरिपरि कोषहरू फुल्दछन ।
डेविएटेड पिनास – डेविएटेड पिनासमा, नाकको केवल एक भागलाई मात्र असर हुन्छ। डेविएटेड पिनासमा, नाक बन्द हुन्छ र सास फेर्न गाह्रो हुन्छ ।
हे पिनास – हे पिनासलाई एलर्जी पिनास पनि भनिन्छ। हे साइनस ती मानिस हुन् जसलाई धुलोकोट र घरपालुवा जनावरमा एलर्जी छ।
यी हुन पिनासको उपचार
पिनास रोग आयुर्वेदिक विधिहरूले उपचार गर्न सकिन्छ। यस रोगबाट पीडित व्यक्तिहरूले आयुर्वेदिक डाक्टरसँग परामर्श लिनु पर्छ।
पिनास रोगमा एन्टिबायोटिकको फाइदा हुन्छ। एन्टिबायोटिक सेवन गर्दा पिनास रोगको प्रगति रोक्न सकिन्छ। औषधि लिनु अघि डाक्टरसँग सल्लाह गर्न नबिर्सनुहोस्।
पिनास बिरामीहरूले नाक स्प्रे प्रयोग गर्नु पर्छ। नाक स्प्रे प्रयोग गर्दा बन्द नाक खुल्छ र पिनास समस्याबाट राहत पाउन सकिन्छ। योग गर्नु स्वास्थ्यको लागि धेरै फाइदाजनक छ। कपालभाती, अनुलोम-एन्टोनोनमहरू, प्राणायाम आदि दैनिक गर्नाले पिनास रोगबाट छुटकारा पाउन सक्छ। नियमित रूपमा योग अभ्यास गर्नाले शरीर स्वस्थ रहन्छ र रोगहरू निको पार्छ।
Previous articleरवि ओडको “पिरतीको खेला ” लोक आधुनिक देउडा सार्वजनिक
Next articleआजबाट मेलम्चीको पानी : उपत्यकाका सीमित ठाउँमा मात्रै आउने